ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်တစ်ဦးကအချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များရန်ကတိကဝတ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ပင်လယ်. 25 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
တက္ကသိုလ်တွင်ငါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဝယ်ယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ချမှတ် သိ. လူများ၏ပမာဏကိုနေစဉ်ကျနော်သတိပြုမိအရာတစ်ခုခု. ကျနော် post-secondary ပညာရေး-ကြောင်သူတို့ရဲ့နှစ်တာကာလအတွင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလုံးကိုပုံစံအမျိုးမျိုးလေးလည်းကြသည်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းခဲ့, ခွေး, ငှက်တို့သည်လည်း, ငါး, ယုန်, hedgehogs နှင့်ပင်အိုးတလုံးကိုဝမ်းထဲမှာနေဝက်.
ဒါဟာထွက်ပြေးပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဖို့အတော်လေးမက်လောက်စရာနိုင်ဟုထင်ရသော်လည်းသင်တို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်အတူပါလာသည့်ကတိကဝတ်စဉ်းစားနေကြတယ်? ဟုတ်ကဲ့, သင့်ကိုသင်ခြွင်းချက်မရှိကိုချစ်ပြီးအသက်တာ၌ရှိသမျှကိုအမြင့်ကြုံဘူးအောင်စဉ်အတွင်းသင့်အဘို့မရှိရနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအတော်လေးနည်းနည်းလိုအပ်ပြုပါ. သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာသင်ဆုံးဖြတ်ရာမှာကူညီပေးအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များမှာ:
တချို့ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်နှင့်အချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာစတင်ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းသင်ငယ်လေးတစ်ကံဇာတာကုန်ကျနိုင်. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာ, ငါ့ခွေးကိုမျှမျှတတလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခဲ့. သူကသေးငယ်တဲ့ခွေး, ဒါကြောင့်မိမိအအစားအစာစားသုံးမှုအသေးခဲ့လျှင်သူသည်အလွန်မှခဲယဉ်း vet သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်. သို့သော်, သူလုနီးပါးဖြစ် 15 နှင့်ယခုသက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်နာ. မိမိအဆေးဝါးများလစဉ်လတိုင်းလက်ရုံးနှင့်တစ်ဦးခြေထောက်ကုန်ကျ. လူသားများကဲ့သို့ပင်, တိရစ္ဆာန်များနှင့်မသက်ဆိုင်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နာစွဲရ. သင်ကငွေကိုထုတ် Shell ဖို့မတတ်နိုင်နိုင်သလား, အဖြစ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်အချိန်? ဒီစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်အရာဖြစ်သည်.
တချို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ "နိမ့်ကျပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု" ဖြစ်သည်ဆိုသည်နေချိန်မှာသူတို့နေဆဲနေ့စဉ်အပေါ် အခြေခံ. သူတို့ကိုကျူးလွန်အချို့သောအချိန်လိုအပ်သည်. အစာ, ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုကြွလာသောအခါစော်ကားမှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစဉ်းစားရန်အနည်းငယ်အရာဖြစ်ကြ၏. သင်သည်အမြဲတစေအိမ်မှာထို့နောက်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်အချိန်ပိုမိုခရီးသွားလာသို့မဟုတ်ဖြုန်းနေပါက, ဒါကြောင့်လတ်တလောအချိန်များအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့ပယ်ကျင်းပရန်ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သင်သွားသောနေစဉ်သင်သည်အမြဲတစေ PET-ထိုင်ရန်သင့်တိရိစ္ဆာန်များသူတို့ကိုမေးနေကြတယ်ဆိုရင်ဒါဟာတခြားသူတွေရဲ့အနှောင့်ရှက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်၏အသက်ကိုပိုပြီးအခြေချနေထိုင်လာသောအခါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဖို့အဓိကအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခုအချိန်မှာသင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ fit ပေမဲ့, သူတို့ကလာမည့်နှစ်တွင်လိမ့်မည်? တွင်5နှစ်ပေါင်း? တွင် 10 နှစ်ပေါင်း? ငါသည်တအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဖို့ဆန္ဒနားလည်ဖို့, ဒါပေမယ့်သတ္တဝါများရေရှည်ကတိကဝတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံခြင်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်. သူတို့သည်နောက်တဖန်သူတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်သောကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များစွဲသောသူကိုငါသိသည်မြောက်မြားစွာသောလူအလမ်းဆင်းနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုအပ်ခဲ့. သူတို့ဟာနေစဉ်ကကျောင်းအတွက်ပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ယူနိုင်ခဲ့ကြ၏ဘွဲ့သစ်တစ်ခုမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တကြိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခဲ့. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမပါစေခြင်းငှါအလိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ခွဲခွာရှိခြင်း, တစ်ခုခုကိုယာယီသို့မဟုတ်အမြဲတမ်း. အချိန်ကတိကဝတ်ဆင်တူ, သင်၏အသက်တာမှာအနည်းငယ်နည်းပါး hectic သည်အထိဖြစ်ကောင်းခင်ဗျားစောင့်ဆိုင်းသင့်.
ဒါကြောင့်သင်ဟာထွက်သွားပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးစားမီ, သင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နှင့်အနာဂတ်အတွက်သင့်အစီအစဉ်များစဉ်းစား. သင်လိုချင်တာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားသို့ကြည့်ရှု, အဘယ်သို့သောသူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုသင့်ရဲ့လက်ရှိလူနေမှုပုံစံစတဲ့ fit လျှင်အဲဒါတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်သည်. နှောင့်နှေးသင့်အဆင်သင့်တိုင်အောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မှားဘ​​ယ်အရာမျှမရှိပါ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်အဆောတလျင်မ.